Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah, Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27!! | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah, Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27!!
Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah, Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27!!
Feb 21, 2017ARRIMAHA BULSHADA, HORUMARKA DALKA, WACYIGELIN, WARAR
16) Waa maxaay faa’iidooyinka aan helaayo hadii aan sameesto qorsho sax ah?
Waxaad noqon doontaa qof kalsooni buuxda ku qabo nafsadiisa awoodana inuu gaaro hadafkiisa.
Waxaad yelaneysaa go’aan cad.
Waxaad ku xisaab tameysaa iney ku sugayaan howlo badan.
Waxad oganeysaa in hadii aad latimaato qorsho cayiman inaad gaaridoonto hadaf kaaga.
Wexey kaa hor istageysaa inaad ka shakiso oo aad gaari weyso hadaf kaaga.
Waxaad ogaaneysaa hadii aad ku adkeysato go’aan kaaga inaad gaari doonto hadaf kaaga.
Waxaad heleysaa kalsooni buuxdo oo ku aadan gaarista go’aankaaga.
Waxaad noqon doontaa qof u firfircoon howsha uu haayo ilaa uu kagaaro hadafkiisa.
17) Sidee lagu helaa kalsoonida?
Waxaa lagu helaa qorshihi aad sameysatay inaad si sax ah ugu dabaqdo kadibna waxaad ogaaneysa inay nafsaddaada waxqabsankarto kalsooni buuxdo ayaana kugu abuurmeyso. Dabcan waa laga hortagi kartaa wax walba oo dhibaato ah waxay ahaadaanba haddii qofku diiradda saaraayo si uu uga faa ideysan lahaay qorshahiisa
18)Maxaa dadka ka hortaagan qorsha iney sameystaan ?
dadka iney qorsha sameystaan waxaa ka hortaagan dhow arimood waxaana ugu horeeyo
Qof ku inuu cabsado
Waxaa uu is dhahaa hadaad qorsho sameysato ama aad ku fashilantaa, ku guul dareysataa amaad ku ceybowdaa iyo wax yaallo kale oo ku aadan cabsida.
Sidoo kale qofka inuu qorsho sameynsan waayo waxaa kamid ah inuu saaxiib layahay ama uu latashto dad iyaga laftirkooda kalsooni la’aan ah ama aan laheen wax qorsho, kuwaas oo kula talinaayo inuusan sameysan wax qorsho ah, haddii uu sameystana ku fashilamaayo illeyn horaa loo yiri saxiibkaa kuma caddeyo kumana madoobeeyo ee siduu yahay ayuu kaa dhigaa
Sidoo kale qofka inuu qorsha sameysan waayo waxaa keeni karo inuu dib wax u dhigo oo uu is dhaho waxaan hadda maqaban kartid waxaan qabanaa hadhow waxaan qabana berito ama waqti kale.
sidoo kale waxa keeni karo sabar la’aanta.
isku day inaad u adkeysato oo aad iska dhigto qof wax badan qaban karo oo aan latashan dadka iyagu qorsho la’anta ah iskana ilaali inaad saxiib la noqoto qof aan laheen wax hadaf ah. Sidoo kale iska ilaali inaad saxiib la noqoto qof aadan nafsaddaada ku soo kordhineynin wax faa’iido ah.Si’uu kuugu hirgalo qorshahaaga lasaaxiib dad khibarada badan u leh waxa adiga aad dooneysid.
Sida aan tusaale uga dayan karno nimankii aduunka magaca kureebay ku waas oo ey kamid ahaayeen.
[isxaaq ni yuutoon] IYO [Toomaas adisoon] ku waas oo isku dayo badan ey sameyeen oo kaabeen maskaxdeyna oo laga yaabo qaar kamid ah dadkena hada joogo intaas oo dulqaad ah in aanay laheen.
Saynisyahadaan waxa ay aamisanaayeen in guusha ey gacantooda kujirto sidoo kale hadii wax badan ku celceliyaan ay gaari karaan hadaf kooda ey lahaayen ama guusha ay usocdaan. Toomaas adisoon hadaan tusaale usooqaato wuxuu sameeyay iskuday ku aadan(999) oona isku dayay inuu sameeyo waxa looyaqano lampad ama Nalka eynu ifsano kaas oo ugu dambeen guulestay markii maad.
19) SIDEE LOO HORMARIYAA NAFTA?
Qof kasto oo aduunka ku nool wuxuu jecel yahay inuu hormariyo naftiisa waxaanu dadaal aad ukala duwan ugu jiraa sida uu uhormarin lahaay naftiisa waxa uu sameynayaa wax kasta oo u arkaayo iney dan utahay inuu naftiisa hormariyo hadaba sida ugu saxsan ee aynu nafteena u hormarin karno.
Inaad noqoto qof kacabsado kuna xeran allah(subxaana qaadir ah).
qof gudan karo waajibka uu saaray allah sida( soonka salaada sakada I w m)
inaad mar walbo ku hayso niyada sidii aad waalidkaaa ugu farxin lahayd oo aad uga war hayn laheed markasta iyoo meelkasta haday dhinteen iyo hadey nool yihiin in aadan walwalin hadii ay dhinteena inad ubadiso ducada iyo aqrinta qur aanka ogow hadii aysan waalidkaa raali kaa ahayn hormarka iyo wanaagaga cid kale faaido uma lahan.
inaad noqoto qof wax kabarta diinta iyo maadiga qofkasto oo labadaas wax kabarto waxa uu noqdaa ruux kor uqaada hormaka dadka iyo dalka sidoo kale wuxuu noqdaa qof sumcad iyo sharaf ku dhex leh bulshada sidoo kale noqdo ruux og runta xaqiiqda iyo nolosha saxda ah.
inaad noqoto qof daacad ah oo dulqaad badan kana xor ah wax kasto oo kasoo horjeesanayo diintiisa kana leexinaayo wadada saxda ah ee alle ogolyahay.
inaad noqotid qof aamin ah oo wax kasto lagu aamini karo.
Inaad noqotid qof ku dadaala inuu siduu dadka ku caawin lahay hadey tallo tahay iyo hadii ay tahay wax kale oo aad u awoodo.
sidoo kale inaad ku kudadaasho caawinta dadka naafada ey aan awoodin wexey awoodaan dadku ilaah udhameyay lixaad kooda,tusaale ahaan haduu yahay qofka qof indhool kucaawi inaad gudbisid wadooyinka haduu yahay qof curyaan ah inaad udhiibto waxa uusan garin. Waa mid kamid ah dariiqyada lagu gaaro qeerka iyo hormarka.
Noqo qof iskiis iskaga shaqeysto oo aan isku haleynin inaad waligaa un cid iskaga shaqeysto isku day xiligaada in adna laguuu shaqeyo oo aad dadaalbadan sameysid.
Inaad noqtid qof da’cad u’ah shaqadiisa markasta ogna shaqadaan iyo ciddaa ushaqeyneso.
Ogow hadii lawaayo cida aad ushaqeyneyso in aadan sii joogi doonin shaqadaas.
Waxaad noqotaa qof aan isticmaalin dhamaan wax ya’laha balwadda ah sida qaadka sigaarka I w m, kuwaas oo dhamaantood sababi kara cuduro kaladuwan sida( waalida inuu cadaado sambabada sidoo kale iney ku dhacdo tiibiyo)
QAYBAHA KALE LASOCO WAQTIYADA KALE
Previous PostDayuurad ku dhacday suuq ku yaalla bartamaha magaalada Melbourne (Daawo Sawirro) Next PostMUUQAAL: Tahriibayaal Badda ku dhex Jira oo Si xun loo garaacayo (Daawo)